Isitolo esidayisa yonke impahla Vape Bans in the United States and Around the World ifektri abakhiqizi | OKUSHA
FEELM Tech Ividiyo
Imfihlo Yokunambitha Okukhulu
ZWA ngaphakathi koHlelo
Vape Ukuvinjelwa e-United States nakuwo wonke umhlaba
Isimo sengqondo esisemthethweni ngokusetshenziswa kwe-vaping ne-nicotine ngokujwayelekile kwehluka kakhulu. E-United Kingdom, ukuphefumula kuyakhuthazwa yizinhlangano zikahulumeni zezempilo. Ngoba ukubhema kudala umthwalo obizayo kwiNational Health Service yase-UK, izwe limele ukonga imali uma ababhemayo beshintshela ku-e-cigaretti esikhundleni salokho.
Iningi lamanye amazwe nawo avumela imakethe evuthayo elawulwayo, kepha ayinamdlandla ekuvumeleni lo mkhuba. E-US, i-FDA inegunya emikhiqizweni yomhwamuko, kepha ichithe iminyaka eyisishiyagalombili edlule izama ukudala uhlelo lokulawula olusebenzayo. ICanada ilandele ngandlela thile imodeli yase-UK, kepha njengaseMelika, izifundazwe zayo zikhululekile ukuzenzela imithetho yazo kwesinye isikhathi ephikisana nezinhloso zikahulumeni wobumbano.
Kunamazwe angaphezu kwama-40 anohlobo oluthile lokuvinjelwa kwe-vaping - kungaba ukusetshenziswa, ukuthengisa noma ukungenisa, noma inhlanganisela. Abanye bavinjelwe ngokuphelele okwenza ukuqhuma okungekho emthethweni, kufaka phakathi ukwenqatshelwa kokuthengiswa nokuba nempahla. Ukwenqatshelwa kuvame kakhulu e-Asia, eMiddle East, naseNingizimu Melika, yize ukuvinjelwa kwe-nicotine okudume kakhulu kungokwase-Australia. Amanye amazwe ayadida. Isibonelo, ukukhuphuka eJapan kusemthethweni futhi imikhiqizo iyathengiswa, ngaphandle kwe-e-liquid ene-nicotine, okungekho emthethweni. Kodwa imikhiqizo kagwayi ongashisi njenge-IQOS isemthethweni ngokuphelele futhi isetshenziswa kabanzi.
Kunzima ukulandela lonke ushintsho emithethweni evuthayo. Esizame lapha wukuncipha kwamazwe lapho kuvinjelwe noma kunemikhawulo ebucayi ekukhiqizeni noma kwimikhiqizo yomhwamuko. Kunencazelo emfushane. Lokhu akuchazwanga njengesiqondisi sokuhamba noma amathiphu wokuhamba nokundiza. Uma uvakashela izwe ongajwayele kufanele uhlole ngomthombo osesikhathini futhi onokwethenjelwa njengamanxusa ezwe lakho, noma ihhovisi lezokuvakasha lezwe olivakashelayo.
Kungani amazwe evimbela ukukhuphuka?
I-World Health Organisation (i-WHO) kanye nengalo yayo elawula ugwayi i-Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) - isivumelwano somhlaba wonke esisayinwe amazwe angaphezu kwe-180 - bakhuthaze imikhawulo kanye nokuvinjelwa kuka-e-cigarettes selokhu imikhiqizo yokuqala yaqala ukufika e-Europe Amabhishi ase-US ngo-2007. I-WHO inethonya elinamandla (futhi kaningi elinamandla kakhulu) kuzinqubomgomo zezempilo nokubhema emazweni amaningi - ikakhulukazi emazweni ampofu, lapho i-WHO ixhasa khona izinhlelo eziqasha izisebenzi eziningi zezempilo zomphakathi.
I-FCTC uqobo ilawulwa ngabeluleki bezinhlangano ezizimele zaseMelika ezilwa nokubhema njenge-Campaign for Tobacco-Free Kids - noma i-US ingeyona ingxenye yalesi sivumelwano. Ngoba la maqembu alwe namazinyo nesipikili ekulweni nokuqhuma kanye neminye imikhiqizo yokunciphisa ukulimala kukagwayi, izikhundla zabo zithathiwe yi-FCTC, kwaba nemiphumela emibi kubantu ababhemayo emazweni amaningi. I-FCTC yeluleke amalungu ayo (amazwe amaningi) ukuthi avimbele noma alawule kabuhlungu ama-e-cigarettes, yize isivumelwano sokusungulwa kwesivumelwano esisohlwini lokwehliswa kokulimala njengecebo elifiselekayo lokulawulwa kukagwayi.
Amazwe amaningi ancike ekuthengisweni kukagwayi, ikakhulukazi ukuthengiswa kukagwayi, ukuthola imali yentela. Kwezinye izimo, iziphathimandla zikahulumeni zithembekile ngokukhetha kwazo ukuvimba noma ukuvimbela imikhiqizo ephefumulayo ukuze ilondoloze imali engenayo kagwayi. Imvamisa ohulumeni bakhetha ukufaka imishanguzo emithethweni yabo yemikhiqizo kagwayi, okwenza kube lula ukubeka intela yokujezisa kubathengi. Ngokwesibonelo, lapho i-Indonesia ikhokha intela engamaphesenti angu-57 kuma-e-cigarettes, isikhulu soMnyango wezeziMali sachaza ukuthi inhloso yale ntela “ukukhawulela ukusetshenziswa kwemimoya.”
Ukuqhuma komphakathi emazweni amaningi kukhawulelwe njengokubhema osikilidi, kakhulu njengase-United States. Uma uzibuza ukuthi ungakwazi yini ukuvota esidlangalaleni, ungahlala ubone enye i-vaper noma obhemayo bese ubuza (noma isenzo) ukuthi iyini le mithetho. Uma ungabaza, vele ungakwenzi. Lapho ukuphaphalaza kungekho emthethweni, kungcono uqiniseke ukuthi imithetho ngeke iphoqelelwe ngaphambi kokuba uqale ukukhukhumeza.
Imikhiqizo yomusi ivinjelwe noma ivinjelwe kuphi?
Uhlu lwethu lubanzi, kepha mhlawumbe aluqondile. Imithetho ishintsha njalo, futhi noma ukuxhumana phakathi kwezinhlangano ezikhuthazayo kuyathuthuka, akusekho okugcina okuphakathi kwemininingwane ngemithetho evuthayo emhlabeni jikelele.Uhlu lwethu luvela enhlanganisweni yemithombo: Umbiko we-Global State of Tobacco Reduction Reduction ovela enhlanganweni yaseBrithani yokunciphisa ukulimaza iKnowledge-Action-Change, Campaign for Tobacco-Free Kids 'Tobacco Control Laws website, kanye ne-Global Tobacco Control site eyenziwe nguJohns Abaphenyi baseHopkins University. Isimo sesinye isibalos kunqunywe ngocwaningo lwangempela.
Amanye ala mazwe anqatshelwe ngokuphelele ukusetshenziswa nokuthengiswa, iningi livimbela ukuthengiswa, kanti amanye avimbela kuphela i-nicotine noma imikhiqizo equkethe i-nicotine. Emazweni amaningi, imithetho ayinakwa. Kwezinye, ziyaphoqelelwa. Futhi, hlola ngomthombo onokwethenjelwa ngaphambi kokuya kunoma yiliphi izwe elinama-vaping gear kanye ne-e-liquid. Uma izwe lingekho ohlwini, ukuvutha kungavunyelwa futhi kulawulwe, noma awukho umthetho othile olawula i-e-cigarettes (kusukela manje noma kunjalo).
Samukela noma yiluphi ulwazi olusha. Uma wazi umthetho osushintshile, noma umthethonqubo omusha othinta uhlu lwethu, sicela ubeke amazwana futhi sizobuyekeza uhlu.
Kusemthethweni ukusebenzisa, akukho emthethweni ukuthengisa
Ukuthengisa okungekho emthethweni, ngaphandle kwemikhiqizo yezokwelapha egunyaziwe
Kusemthethweni ukusebenzisa, okungekho emthethweni ukungenisa noma ukuthengisa. NgoFebhuwari 2020, umongameli waseMexico wakhipha isimemezelo esivimbela ukungeniswa kwayo yonke imikhiqizo evuthayo, kufaka phakathi nemikhiqizo ye-zero-nicotine. Kukhona, nokho, kusekhona umphakathi okhulayo oshisayo ezweni, kanye nobuholi bezokumela obenziwa yiqembu labathengi iPro-Vapeo Mexico. Okwamanje akwaziwa ukuthi uhulumeni uzozama yini ukuthatha imikhiqizo elethwe kuleli izivakashi
Kukholakala ukuthi akukho emthethweni ukusetshenziswa, akukho emthethweni ukuthengisa i-nicotine
Kusemthethweni ukusetshenziswa, kusemthethweni ukuthengisa — kepha ukuthengiswa kwemikhiqizo ekhiqizwe ngemuva kuka-Agasti 8, 2016 akuvunyelwe ngaphandle kwe-oda lokumaketha elivela ku-FDA. Ayikho inkampani evukelayo efake isicelo se-oda lokumaketha okwamanje. NgoSepthemba 9, 2020, imikhiqizo yangaphambi kuka-2016 engakangeniswa ukuze ivunyelwe ukumaketha nayo izobe ingekho emthethweni ukuyithengisa
Kusemthethweni ukusetshenziswa, okukholakala ukuthi akukho emthethweni ukuthengisa, ngaphandle kwemikhiqizo yezokwelapha egunyaziwe
Ukukholwa okusemthethweni ukusetshenziswa, akukho emthethweni ukuthengisa — kepha isimo asiqinisekile
Kukholakala ukuthi akukho emthethweni ukusetshenziswa, akukho emthethweni ukuthengisa
Kusemthethweni ukusetshenziswa, okukholakala ukuthi akukho emthethweni ukuthengisa
Kusemthethweni, ukusetshenziswa, okungekho emthethweni ukuthengisa — noma kunjalo, izwe lamemezela ngo-2019 inhloso yalo yokwenza kube semthethweni futhi kulawulwe i-e-cigaret
IBangladesh njengamanje ayinayo imithetho noma imithethonqubo eqondene nokuqhuma. Kodwa-ke, ngoDisemba 2019 isikhulu soMnyango wezeMpilo satshela iReuters ukuthi uhulumeni "usebenza ngenkuthalo ukuvimba ukukhiqizwa, ukungeniswa nokuthengiswa kogwayi e-e kanye nawo wonke ama-tobacco aphefumulayo ukuvikela ubungozi bezempilo."
Kusemthethweni ukusebenzisa, akukho emthethweni ukuthengisa imikhiqizo eminingi
Kuvinjelwe: ukusetshenziswa ngokungemthetho, ukuthengisa okungekho emthethweni
Ukholelwa ukuthi uvinjelwe
NgoSepthemba 2019, uhulumeni ophakathi waseNdiya wakwenqabela ukuthengiswa kwemikhiqizo evukayo ngqo. Uhulumeni, azi kahle ukuthi amaNdiya ayizigidi eziyikhulu ayabhema nokuthi ugwayi ubulala abantu abacishe babe yisigidi ngonyaka, akazange enze zinyathelo zokunciphisa ukutholakala kukagwayi. Hhayi ngengozi, uhulumeni waseNdiya ungumnikazi wamaphesenti angama-30 enkampani kagwayi enkulu kunazo zonke ezweni
Kusemthethweni ukusebenzisa, okusemthethweni ukuthengisa amadivayisi, okungekho emthethweni ukuthengisa uketshezi oluqukethe i-nicotine (yize abantu bengangenisa imikhiqizo equkethe i-nicotine ngemikhawulo ethile). Imikhiqizo kagwayi evuthayo (i-HTPS) efana ne-IQOS isemthethweni
Kusemthethweni ukusebenzisa, okungekho emthethweni ukuthengisa imikhiqizo equkethe i-nicotine. Yize ukuthengiswa kwabathengi kwemikhiqizo equkethe i-nicotine kungekho emthethweni, iMalaysia inemakethe echumayo evuthayo. Iziphathimandla ziye zahlasela abathengisi ngezikhathi ezithile zashaqa nemikhiqizo yazo. Ukuthengiswa kwayo yonke imikhiqizo evuthayo (noma ngaphandle kwe-nicotine) kuvinjelwe ngqo ezifundeni zaseJohor, Kedah, Kelantan, Penang naseTerengganu
Kukholakala ukuthi kuvinjelwe, ngokususelwa ku-athikili ka-Agasti 2020
Kusemthethweni ukusetshenziswa (kuvinjelwe emphakathini), akukho emthethweni ukuthengisa
Kuvinjelwe: ukusetshenziswa ngokungemthetho, ukuthengisa okungekho emthethweni. Ngonyaka odlule, ukutholakala nokuba necala nakho kuyicala, okujeziswa ngenhlawulo efinyelela ku- $ 1,500 (US)
Ukukholelwa okusemthethweni ukusebenzisa, akukho emthethweni ukuthengisa. I-Thailand izuze idumela lokuphoqelela ukuvinjelwa kwayo ekungenisweni nasekuthengisweni kwemikhiqizo evungayo ngezehlakalo eziningana ezisezingeni eliphakeme eminyakeni yamuva, kufaka phakathi ukuvalela izivakashi ezithwala "ukungenisa". Uhulumeni kubikwa ukuthi ubuye acubungule imithetho yakhe eqinile kagwayi
Ukukholelwa okusemthethweni ukusebenzisa, akukho emthethweni ukuthengisa
Kusemthethweni ukusebenzisa, okungekho emthethweni ukungenisa noma ukuthengisa. Ukuthengiswa nokungeniswa kwemikhiqizo evukayo akunamthetho eTurkey, kwathi lapho izwe liphinda liqinisekisa ukuvinjelwa kwalo ngo-2017, i-WHO yakhipha umbiko wabezindaba uthokozela lesi sinqumo. Kepha imithetho iyashayisana, futhi kunemakethe evuthayo nomphakathi ovuthayo eTurkey
Kusemthethweni ukusebenzisa, akukho emthethweni ukuthengisa i-nicotine. E-Australia, ukuphatha noma ukuthengisa i-nicotine akukho emthethweni ngaphandle kokuyalelwa ngudokotela, kepha ngaphandle kwesimo esisodwa (Western Australia) amadivayisi evuthayo asemthethweni ukuthengisa. Ngaleso sizathu kunemakethe ekhulayo evuthayo naphezu komthetho. Izinhlawulo zokuba nempahla ziyahlukahluka kuye ngesifundazwe, kodwa kungaba nzima impela
Kusemthethweni ukusetshenziswa, akukho emthethweni ukuthengisa — yize izwe libonakala lisengcupheni yokulawula imikhiqizo ephefumulayo
Qaphela futhi wenze ucwaningo!
Futhi, uma uvakashela izwe ongaqiniseki ngalo, sicela uhlole imithombo kulelo zwe mayelana nemithetho nokuthi yini engabekezelelwa yiziphathimandla. Uma ubhekise kwelinye lamazwe lapho kutholakala khona ama-vapes okungekho emthethweni - ikakhulukazi emazweni aseMpumalanga Ephakathi - cabanga kabili ukuthi uzimisele kangakanani ukuvota, ngoba ungabhekana nemiphumela emibi. Iningi lomhlaba lamukela ama-vapers kulezi zinsuku, kepha okunye ukuhlela nokucwaninga kungagcina uhambo lwakho olumnandi lungaphenduki iphupho elibi.
I-Global Global Trade "VIP Pass" ...
Sine "Imfihlo Yokunambitha Okukhulu ...
I-FEELM ikhanya ku-Vap enkulu kakhulu emhlabeni ...
Uhlu lwe-SMOORE ku-Hong Kong Stock Exchange
Izimfihlo Ezifihliwe ZOKUTHOLA I-Atomization Techn ...
USteven Yang: Isinyathelo esisodwa kimi, i-One Giant L ...
Izinyathelo Eziyisishiyagalombili Zokulwa NE-COVID-19, FEELM is R ...
I-FEELM Won iF Design Award 2020 entsha ...
Isixazululo se-Pod Esithuthukisiwe
© Copyright - 2010-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe. Ibalazwe - AMP Ucingo
I-E Cigarette Blister Pack, Ugwayi we-E Liquid Vapor, Ukubhema Okuhlukile, Ugwayi waseNewport E, Ugwayi Wokushisa, I-Epen,